Real Madrid oo heshay furaha ay ku heli karto saxiixa Pogba – Gool FM
(Madrid) 08 Dis 2019. Kooxda Real Madrid ayaa heshay furaha ay kaga soo qaadan karto xiddiga reer France ee Paul Pogba dhigeeda Manchester United marka uu furmo suuqa kala iibsiga.
Zinedine Zidane ayaa wuxuu doonayaa inuu helo adeega xiddiga ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Paul Pogba si uu u xirto maaliyada cadaanka ah ee Real Madrid xilliyada soo socda.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa dhawaan daabacay in Zidane uu ku adkeysanaayo helida saxiixa Pogba si uu ugu xoojisto khadka dhexe ee kooxda Real Madrid.
Dhankiisa wargeyska Don Balón ayaa wuxuu xaqiijiyay maanta in Real Madrid ay qorsheeneyso inay u adeegsato heshiiska Pogba labadeeda xiddig ee James Rodríguez iyo Gareth Bale.
Labadan xiddig ayaa isaga baxay xisaabta tababare Zinedine Zidane ee Real Madrid xilli ciyaareedkan, taasoo ka dhigtay in madaxweynaha kooxda ee Florentino Perez uu ogolaado inay u dhaqaaqaan garoonka Old Trafford si ay ugu badashaan Paul Pogba.
Paul Pogba ayaan ka qeyb qaadanin kulamada kooxda Manchester United ee xilli ciyaareedkan marka laga reebo 5 kulan oo horyaalka Premier League ah, wuxuuna kooxda kaga maqan yahay dhaawac dhanka canqawga ah.